Wasiirka iyo Madaxda Wasaaradda Ganacsiga oo Baarlamaanka Soomaaliya Kala Qeyb-galay La-tashi ay Ganacsatada Kala Sameynaayeen Sharciga Jaan-goynta iyo Tayo-dhowrka Soomaaliya+SAWIRO – MOCI
31-Dec-2019-Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha ee Soomaaliya Inj. Cabdullaahi Cali Xasan, Agaasimaha guud ee Wasaaraddaasi Md. Cabdicasiis Ibraahim Aadan iyo weli ba madax kale oo ka tirsan Wasaaraddaasi, ayaa maanta ka qeyb-galay kulan la tashi ah oo guddida Dhaqaalaha, Ganacsiga, Maal-gashiga iyo Warshadaha ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya ay Ganacsatada dalka kala yeelanayeen hindise sharciyeedka lagu sameynaayo sharciga jaan-goynta iyo tayo-dhowrka Soomaaliyeed.
Kulankan oo ka qabsoomay Muqdisho, ayaa waxa goob-joog ka ahaa guddoomiyaha guddida Dhaqaalaha, Ganacsiga, Maal-gashiga iyo Warshadaha ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya Xildhibbaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene, Xildhibbaan Daahir Maxamed Muuse, Xildhibbaan Cabdicasiis Cabdillaahi Yuusuf iyo guddoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga ee Soomaaliya iyo weli ba ganacsato oo tiro badan oo ka kala socdey qeybaha kala duwan ee ganacsatada dalka.
Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha oo ugu horreyn halkaas ka hadlay, ayaa ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray hindise sharciyeedkani, waxaana uu carabka ku dhuftay in Wasaaradda Ganacsigu ay dedaal badan soo gelisay sharcigan isla mar ahaantaana hore loogga ansaxiyey Golaha Wasiirada balse laga maarmi waayey in la tashi laga la sameeyo Ganacsatada Soomaaliyeed.
“Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadahu iyada oo gudanaysa waajibaadkeeda Dastuuriga ah, waxay shaqo badan iyo dedaal badan ay gelisay sharcigan, waxaana iska kaashaday garyaqaanada Wasaaradda, kaalinna ay ka qaateen Wasaaradda Cadaaladda, Gayqaanka Guud, wada-tashi na laga la sameeyey cid walba oo la is lee yahay laga ma maarmaan ayey u tahay marka sharci la bilaabayo ama la dejinaayo”. Ayuu yidhi Inj.Cabdullaahi Cali Xasan
Inj. Cabdullaahi Cali Xasan oo sidoo kale hadalkiisa sii wata, ayaa waxa uu yidhi: “Sharcigan oo 18kii April 2019 ay ansaxiyeen Golaha Wasiiradu, waxa markii dambe loo gudbiyey Golaha Shacabka, markii dambe na waxa gacanta ku qabtay guddida arrimaha Ganacsiga ee Golahaas, waxaana laga ma maarmaan noqotay in sharcigii lagu soo celiyo Ganacsatada Soomaaliyeed oo ay wax ku darsadaan, wax ka beddelaan, waxna ka dhimaan sababtoo ah waa sharci taabanaya nolosha dadka Somaaliyeed.”.
Wasiirka Ganacsigu, waxa kale oo uu ka waramay muhiimadda uu sharcigani u lee yahay dalka, waxaana uu xusay in uu aas-aas u yahay horumarka ganacsiga Soomaaliyeed.
“Halkan waxaynnu maanta u joognaa in lagu falan-qeeyo hindise Sharciyeedka jaan-goynta tayo-dhowrka iyo hay’adda tayo-dhowrka Soomaaliyeed oo is wata, runtii sharcigani waa mid muhiimad ballaadhan u leh nolosha, caafimaadka iyo bad-qabka dadka Soomaaliyeed, runtii bani Aadamka dhammaantiis ba waa sharci aan laga maarmi karin, waa sharci runtii aas-aas u ah horumarka aynnu dooneyno in ganacsigeenu ku tallaabsado, waana sharci koobaya waxa aynnu u dhoofinaynno dalka dibaddiisa, waxa aynnu dalka keenaynno iyo wixii aynnu dalka gudahiisa ku isticmaalayna ba waa mid aad u koobaya.”. Ayuu yidhi Md.Cabdullaahi Cali Xasan.
Dhinaca kale, waxa iyagu na halkaas ka hadlay guddoomiyaha guddida Dhaqaalaha iyo Ganacsiga ee Golaha Shacabka Md. Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene, Xildhibbaano iyo weli ba guddoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliya, waxaana ay dhammaantood aad ugu dheeraadeen muhiimadda uu sharcigani u lee yahay dalka.
Hindise Sharciyeedkan, ayaa hor-yaala Golaha Shacabka ee Soomaaliya, waxaana uu qeexayaa aas-aaska iyo dhismaha hay’adda qaran ee jaan-goynta iyo tayo-dhowrka ee dawladda Soomaaliya.